गोली चलाउन प्रहरी किन वाध्य भए? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
गोली चलाउन प्रहरी किन वाध्य भए?
झापाको बिर्तामोडमा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । अर्जुनधारा–५ का ३२ वर्षीय नरेश थापाको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको झापा प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
अर्जुनधारा–११ का ११ वर्षीय बालक लक्ष्मण सिवाकोटीको मृत्यु शंकास्पद भएको घटनामा आफन्तले दिएको उजुरी प्रहरी अनुसन्धान अपूरो भएको भन्दै आफन्त र गाउँलेले बिर्तामोडमा निकालेको विरोध र्‍याली हिंसामा परिणत भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
परिवार र गाउँलेले निरन्तर आन्दोलन चर्काएपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार अपराह्नदेखि बिर्तामोडको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ । प्रदर्शनकारीले कफ्र्यु उल्लंघन गर्दै यान्त्रिक कार्यालयमा आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
प्रमुखको घरमा तोडफोड र आगजनी
प्रदर्शनकारीले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आगजनीको प्रयास र विर्तामोड नगरपालिका प्रमुख धु्रवकुमार सिवाकोटीको घरमा तोडफोड गरेका छन् । घरको कम्पाउन्डभित्र राखिएको विर्तामोड नगरपालिकाको मे१ज १२१ र नगर प्रमुख सिवाकोटीको निजी बा१०च ३०६१ नम्बरको गाडी तोडफोड गरिएको छ । उनको घरमा पार्किङ गरेर राखिएको मे७प ३००० मोटरसाइकलमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् ।
के थियो घटना निहुँ ?
विजयादशमीका दिन बिहान १४ असोजमा आफन्तको घरमा जुत्ता लिन गएका ११ वर्षीय सिवाकोटीको शव भोलिपल्ट बिहान विर्तामोड नगरपालिका–१ को बैसाबाडीमा फेला परेको थियो । शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिनुका साथै अन्डकोष काटिएको अवस्थामा शव फेला परेपछि आफन्त र गाउँलेले घटनालाई हत्या भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गर्दै आएका थिए ।
बालकको मृत्यु प्रकरणमा विर्तामोड – ५ का सुरेश पोखरेल र उनका परिवारका आठजना सदस्यविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । प्रहरीले शुक्रबार सबै आरोपीलाई अदालतमा बुझाउने तयारी गर्दा विरोध हिंसामा परिणत भएको हो । बालकको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै मृतकका आफन्त र स्थानीयवासीले बिहीबार मात्रै संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका थिए ।
प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान नगरी आरोपीलाई अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको भन्दै आफन्त र गाउँलेले शुक्रबार विर्तामोड बन्दको आह्वान गरेका थिए । बन्द सफल पार्ने अभियानस्वरूप निकालिएको विरोध जुलुसमा प्रहरीले अवरोध गरेपछि तनावको स्थिति सिर्जना भएको हो ।
गृहद्वारा छानबिन समिति गठन
बिर्तामोड घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।
चीन नेपालसंग असन्तुष्ट, कारण यस्तो